Marti Gelinta Podcast-ka, Isuduwaha, Liiska Hubinta Xayeysiinta | Martech Zone
Sanadkii hore wuxuu ahaa sanadkii Podcasting wuxuu ku qarxay caan. Xaqiiqdii, 21% dadka Mareykanka ah ee da'doodu ka weyn tahay 12 sano waxay yiraahdeen waxay dhageysteen Podcast bishii la soo dhaafay, taas oo si tartiib tartiib ah ayuu u kordhay sanadba sanadka ka dambeeya laga bilaabo saamiga 12% ee 2008 waxaanan arkayaa oo kaliya lambarkan oo sii kordhaya.
Marka ma waxaad go'aansatay inaad bilowdo joornaal kuu gaar ah? Hagaag, waxaa jira dhowr waxyaalood oo laga fiirsado marka hore - halka aad ku martigalin doonto Podcast-kaaga iyo halka aad ku horumarin doonto. Hoos waxaan ku taxay talooyin dhawr ah iyo casharo laga bartay kor u qaadista barmaamijkeena Cidhifka shabakadda, sidaa darteed waxaan rajeynayaa inay adiga wax kuu tarayaan!
Aqoon-isweydaarsiga Podcasting iyo Bandhigga
Waxaan dhawaan u soosaaray aqoon isweydaarsi loogu talagalay Podcasters-ka shirkadaha si aan u geeyo istiraatiijiyado gaar ah oo loogu talagalay isku-xidhka iyo kor u qaadida barnaamijyadooda 'podcast' Waxaan ku isticmaalnay qaabab badan oo ka mid ah Faylasha Dell Luminaries, oo ku riixaysa 1% ugu sarreeya dhammaan barnaamijyada ganacsiga.
Halka Lagu Qabto Podcast-kaaga
Kahor intaadan uqeybineynin nidaamyada, waxaad ubaahantahay inaad go'aansato halka aad rabto ciidankii Podcast-kaaga. Go'aaminta martigelintaada Podcast-ka waxay ku xirnaan doontaa waxyaabo badan oo ku saabsan halka aad ku soo gudbin karto podcast-kaaga maadaama tusaha qaarkood ay xiriir gaar ah la leeyihiin kuwa kale. Barnaamujkeenna 'Edge of the Web', waxaannu kula marti-gelineynaa Libsyn waana mid ka mid ah kuwa ugu caansan martida loo yahay.
Ha ku martigalin barnaamijkaaga 'Podcast' martida websaydhka caadiga ah ama websaydhkaaga hadda jira. Deegaanada martigelinta Podcast waxay leeyihiin kaabayaal loo dhisay fayl maqal ah oo ballaaran oo laga duubo kana soo degsato webka. Jawiga caadiga ah ee martigelinta websaydhadu waxay sababi kartaa hakad dhegeysi waxayna xitaa kugu kici kartaa lacag iyadoo lagaa qaadayo kharashyo badan oo ku saabsan isticmaalka baaxadda.
Martech ZoneTalada waa in la martigeliyo Transistor. Waxaad akhrin kartaa dulmarka madal podcast halkan, laakiin marka la soo koobo, way fududahay in la isticmaalo, waxay leedahay martigelin aan xadidnayn, waxayna leedahay qalab aad u fiican oo loogu talagalay iskaashiga iyo ganacsiga.
Isdiiwaangeli 14 maalmood oo tijaabo bilaash ah oo Transistor ah
Qaar ka mid ah shirkadaha kale ee martigeliya Podcast ee aad isticmaali karto waa:
Acast - Soosaarida Podcast, dhageysiga, martigelinta, iyo qeybinta RSS.
barroosinka - Abuur oo martigeliso dhacdooyin aan xadidnayn, u qaybi bandhiggaaga meel kasta, lacagna ka samee. Dhamaan hal meel, dhammaan bilaash.
Audioboom - Gaadho dhagaystayaasha heeganka ah kuna soo gudbi farriintaada astaanta ah adoo adeegsanaya gelinta xayeysiinta firfircoonida iyo oggolaanshaha ka imanaya awoodda ugu sarreysa ee wax lagu qoro
Blubrry - Blubrry.com waa boodhadh bulsheed iyo tusayaal siiya abuurayaasha awood ay lacag ku kasban karaan, ku heli karaan cabbiraadda dhagaystayaasha oo faahfaahsan oo ay ku martigelinayaan maqal iyo muuqaalba. Haddii aad tahay abuuraha warbaahinta, xayeysiiyaha ama macaamiisha warbaahinta, Blubrry waa isgaarsiintaada warbaahinta dhijitaalka ah.
Bixis - Ku bilow daadihinta maanta adoo marti gelinaya Podcast bilaash ah oo ka socda Bixis, softiweerka barnaamijka ugu fudud ee loogu talagalay martigelinta, dhiirrigelinta, iyo raadinta qoraalkaaga.
La tuuray - Laga bilaabo martigelinta iyo jadwalka firfircoonida iyo falanqaynta, Casted waa maareynta maareynta waxyaabaha loogu talagalay suuqleyda B2B oo leh cod.
Dab-damis - Martigeliyaha podcast-ka gaarka ah oo leh is-dhexgal isticmaale oo qurux badan oo ku jira labadaba degel iyo podcast-kaaga.
Libsyn - Libsyn waxay bixisaa wax kasta oo aad u baahan tahay: qalabka daabacaadda, martigelinta iyo gudbinta warbaahinta, RSS loogu talagalay iTunes, Shabakad Websaydh ah, Xogta, Barnaamijyada Xayeysiinta, Mawduuca Premium, Barnaamijyada loogu talagalay aaladaha Apple, Android & Windows.
Megaphone - qalab lagu daabaco, lacag lagu sameeyo, laguna cabiro meheraddaada podcast-ka.
Omny Studio - Omny Studio waa xal podcasting ganacsi oo ay ku jiraan tifaftiraha khadka tooska ah, lacag-ururinta, qabashada warfaafinta, warbixinta, iyo qaabab kale oo fara badan.
PodBean - Xalka daabacaadda fudud ee Podcast-ka fudud. Xaddiga xaddidan iyo keydinta. Wax kasta oo podcaster ah wuxuu u baahan yahay inuu marti galiyo, kor u qaado, oo uu raadsado podcast-kaaga.
Fudud - Kusoo daabac qoraaladaada sida ugu fudud.
SoundCloud - Ku dhejinta barnaamijka 'SoundCloud' waxay u sahlaysaa qof walba inuu sheego sheekooyinka, soo dejiyo, lana wadaago. Ku dhis bulshadaada tan ugu xasiloon uguna macquulsan madal martigelinta adduunka.
Spreaker - Spreaker wuxuu leeyahay wax walba! Samee koontadaada oo diyaar u noqo inaad duubto podcodka ama aad martigeliso barnaamijyo raadiye toos ah kombiyuutarkaaga ama qalabkaaga mobilada.
Diyaaradda Podcast - Marti-gelinta Podcast-ka ee Premium: Gaarsiinta La Dardargeliyay iyo La Kordhiyay.
Ka dib markaad dejiso martigalintaada Podcast, waxaad u baahan doontaa inaad haysato RSS quudin ansax ah. Marar badan markii aad dejinayso koontada martigelinta ee podcast-ka waxaad waayi doontaa wax jabin doona quudinta RSS. Kahor intaadan u dirin diiwaanka, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso bal si aad u aqbasho RSS quudintaadu. Si aad u tijaabiso quudintaada RSS, isticmaal Tuur Feed ansaxiyaha si loo arko haddii aad wax khalad ah samaysay. Haddii aad haysato quudin sax ah, ka dib u gudub galkaaga gudbinta.
Xagee Kafeyn kartaa Podcast-kaaga
Xasuusin dhinaca: Kahor intaadan u dirin boodhkaaga mid ka mid ah tusayaasha la heli karo, waxaan kugula talinayaa inaad haysato wax ka badan hal dhacdo oo Podcast ah oo ku jirta RSS RSS-kaaga. Waxaad u soo gudbin kartaa inta badan tusayaasha hal koob oo keliya, laakiin dhagaystayaasha badankood waxay u baahan yihiin inay arkaan wax ka badan dhacdada ka hor intaanay isku qorin barnaamijkaaga.
Maxaa yeelay, iPhone iyo Android aaladaha ayaa gacanta ku haya suuqa mobilada, labadan diiwaangelinood ee ugu horreeya ayaa lagama maarmaan u ah Podcast kasta!
iTunes - Ka dib marka aad abuurto RSS quudintaada, gudbinta galkaaga Podcast-ka ee iTunes waa inay noqotaa talaabadaada koowaad. iTunes wuxuu leeyahay mid ka mid ah shabakadaha ugu caansan dhageystayaasha dhageystayaasha. Waxaad marka hore u baahan doontaa inaad haysato aqoonsi Apple ah, haddii aad horey u haysatay iPhone, waa inaad aqoonsi haysataa mar hore. Ku soo gal tan kan Podcast -ka iTunes bogga xiriirinta ee leh Aqoonsigaaga Apple oo ku dheji quudintaada RSS bogga URL oo soo bandhig bandhiggaaga. Waxay kuxirantahay koontadaada, waxay si dhaqso leh ku ansaxin kartaa ama waxay qaadan kartaa dhowr maalmood. Marka laguu oggolaado iTunes, bandhiggaagu wuxuu ka muuqan doonaa waxyaabo badan oo kale oo kala duwan oo otomaatig ah si toos ah maaddaama qalabkaasi ka helayo quudintooda iTunes. Nasiib darrose, iTunes, ma heli doontid midkoodna Analytics la xidhiidha koontadaada.
Isdiiwaangeli Podcast-kaaga iTunes
Maareeyaha Podcasts Google - Google waxay sii deysay barxad ay kujirto xoogaa falanqeyn ah oo loogu talagalay la socodka dhegeysigaaga barnaamijyadaada. Waxaad arki kartaa tirada riwaayadaha, riwaayadaha 30-ka maalmood ee ugu horreeya, celceliska muddada, ka dibna kormeeraya waxqabadka waqtiga. Ku soo gal koontada Google, oo raac talaabooyinka ku dar Podcast-kaaga.
Isdiiwaangeli Podcast-kaaga Google
Pandora - Pandora wuxuu sii wadaa inuu noqdo dhagayste aad u weyn wuxuuna si buuxda u taageeraa Podcasts sidoo kale, xitaa isagoo awood u leh inuu kormeero.
Isdiiwaangeli Podcast-kaaga Pandora
Spotify - Spotify wuxuu sii wadaa inuu ku sii fido nuxurka maqalka iyo, iibsashada Anchor, wuxuu ujeedo culus ka leeyahay lahaanshaha qalabka. Iyada oo isticmaaleyaal badani, ma rabi doontid inaad seegto!
Isdiiwaangeli Podcast-kaaga 'Spotify'
Amazon - Amazon Music waa soogalooti cusub laakiin leh Audible, Prime, iyo kaaliyaha codka Alexa ayaa gaara, ma aha inaad ka tagto kanaalkan muhiimka ah.
Isdiiwaangeli Podcastkaaga oo leh Amazon Music
Ikhtiyaar ahaan, waxaad sidoo kale ku qori kartaa boodhkaaga qalabkan iyo tilmaamahan si loo ballaariyo gaadhistaada:
Acast - Xitaa haddii fiidiyowgaaga lagu marti geliyo bixiye kale, waxaad ku qori kartaa Podcast-kaaga koontada bilawga bilaashka ah.
Kudar Podcast-kaaga Podcast Acast
AnyPod - AnyPod waa xirfad caan u ah aaladaha Amazon Alexa ku shaqeeya.
Ku dar Podcast-kaaga barnaamijka 'AnyPod'
Blubrry - Blubrry sidoo kale waa galka ugu weyn ee Podcast-ka ee internetka, oo ay ku qoran yihiin in ka badan 350,000 oo Podcast. Waxay sidoo kale bixiyaan xayeysiin iyo adeegyo kale oo loogu talagalay kuwa wax duuba.
Abuur Koontada Xayeysiinta Bilaashka ah iyo Kudar Podcast-kaaga
Jaban - Jaban waa suuq lagu iibiyo laguna dhiirrigeliyo barnaamijyadaada (podcasts). Barnaamijkoodu aad buu u wanaagsan yahay, wuxuuna ka dhigayaa wadaagida bulshada ee Podcast-kaaga si gaar ah waxtar leh.
Ku xidhnow Podcast-gaaga Jabiyaha
Sanduuqa Kabka - Sanduuqa Kabka waxay bixisaa Castbox Creator Studio, oo ah qalab ay ku jiraan gorfayn adag oo adag, si aad u cabbiri karto oo aad ula macaamili karto macaamiishaada iyo sidoo kale inaad sii dejiso oo aad u soo dejiso.
Tilmaamaha Ku Saabsan Gudbintaada Podcast-kaaga 'Castbox'
iHeartRadio - Waayo, iHeartRadio, halkan waa halka ay ku bixinayso in Libsyn ay marti kuu noqoto. Waxay xiriir la leeyihiin iHeartRadio waxaadna sameyn kartaa xisaabtaada Libsyn si aad si otomaatig ah u abuurto oo aad u quudiso kanaalkaaga. Si aad tan u dejiso, hoosta tabta "Goobaha" ee koontadaada, guji "Add New" ka dibna raac tilmaamaha si aad u sameysid durdur iHeartRadio ah. Fiiro gaar ah: Podcast-kaaga wuxuu u baahan yahay inuu firfircoonaado in ka badan laba bilood gudahood Libsyn ka hor intaadan awoodin inaad u soo gudbiso iHeartRadio.
U Gudbi Podcast-kaaga iHeartRadio
daruuro - Haddii Podcast-kaaga horeba ugu jiray iTunes, wuxuu ku soo muuqan doonaa maalin gudahood Dusha sare. Haddii kale, waxaad gacanta ku dari kartaa:
Adigu gacanta ku dar Podcast-kaaga si aad u Weyn
Pocket Casts - Codsi ku saleysan websaydh iyo moobiil oo u saamaxaya dadka isticmaala inay maareyn karaan oo ka dhageysan karaan qalabka oo dhan Kusoo gudbi Podcast-kaaga Jeebka jeebka soo gudbiyo .
Kusoo gudbi Podcast-kaaga Goobaha Jeebka
Podchaser - keydka xogta iyo qalabka daahfurka. Hadafkoodu waa inay kuu fududeeyaan inaad dhiibto ra'yi ku saabsan boodhadhka aad jeceshahay oo aad si fudud ku ogaan karto boodhadhka. Ka hel fiidiyowgaaga 'Podchaser' oo waad ku dacwoon kartaa adoo adeegsanaya emaylka diiwaangashan ee quudintaada Podcast.
Sheeg Podcast-kaaga Podchaser
Qoor -qoor - Podknife waa tusaha khadka tooska ah ee fiidiyowyada oo shaqo weyn ka qabta abaabulka Podcasts mowduuc iyo goobta. Users sidoo kale dib u eegi karaan oo ay jecel yihiin podcasts ay jecel yihiin. Markaad isdiiwaangaliso oo aad gasho, waxaad kaheli doontaa iskuxirka gudbinta ee menu-ka.
RadioPublic - RadioPublic waa caafimad, la cabbiri karo, oo dhaqaale ahaan waari kara barnaamijyada dhageysiga podcast-yada ay sugayaan. Waxaan ka caawinnaa dhagaystayaasha inay ogaadaan, la shaqeeyaan, oo ay dhaqaale ahaan ku abaalmariyaan kuwa sameeya podcast-adigu. Xaqiiji bandhiggaaga RadioPublic si aad u bilowdo inaad kula xiriirto dhagaystayaashaada maanta.
Sheeg Podcastkaaga RadioPublic
Tolli - Shakhsi ahaan, Stitcher waa barnaamijka aan ugu jeclahay barnaamijka 'podcast'. Dhammaan dhegeysigeyga 'Podcast' waxaa lagu sameeyaa barnaamijkan. Stitcher waa barnaamij bilaash ah oo in ka badan 65,000 oo raadiyayaal ah iyo podcasts la heli karo. Si aad u soo gudbiso Podcast-kaaga, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso lammaane ahaan. Tirakoobyadaada show waxaa laga heli karaa Barta Wadaagga sidoo kale.
Kudar Podcast-kaaga Stitcher
TuneIn - TuneIn waa tusaha kale ee bilaashka ah oo aad soo gudbin karto galkaaga. Si aad u soo gudbiso Podcast-kaaga, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso foomkooda. Xisaab kuma lahaan doontid TuneIn sida aad ula yeelan karto tusmooyinka kale. Marka, haddii aad ubaahantahay inaad cusbooneysiiso waxkasta quudintaada, waxaad ubaahnaan doontaa inaad mar labaad howshaas mariso. TuneIn sidoo kale waxay leedahay Xirfadda Amazon halkaas oo Podcast-kaaga lagu ciyaari karo iyada oo loo marayo aaladaha ku shaqeeya Alexa!
Kudar Podcast-kaaga TuneIn
Vurbl - Meel loogu talagalay socodka maqalka oo loogu talagalay dhammaan noocyada abuuraha maqalka, iyo qof kasta oo jecel dhageysiga codka. Waxaan ku taageereynaa abuurayaasha maqalka iyada oo loo marayo moodeelkeena saldhigga ah waxaanan ka caawinnaa dhagaystayaasha inay ku xirmaan waxyaabo macno leh oo ay ku dhageystaan.
Sheeg Xaruntaada Vurbl
La Wadaag Barnaamijyada Maqalka ah ee Warbaahinta Bulshada
Maqal maqal - Codkaaga u rogo is-dhexgal fiidiyowyo bulsheed leh Maqal maqal.
Madaxa - Abuur barnaamijyo maqal ah oo muuqaal ah, dhacdooyin buuxa oo fiidiyoow ah, si otomaatig ah wax u qora, oo u dhiirrigeli faylkaaga fiidiyowyo badan oo aad rabto Madaxa.
Mawjad - Mawjad waxay awood kuu siineysaa inaad sameysid barnaamijyo maqal ah - fiidiyowyo leh codkaaga Podcast-ka - oo lala wadaagi karo bulsho ahaan iyadoo la adeegsanayo ciyaartoygooda.
Sida Loo Kordhiyo Podcast-kaaga
Ma ogtahay in Google uu hadda tilmaamayo podcasts sidoo kalena uu ku soo bandhigayo carousel bogagga natiijada mashiinka raadinta? Google wuxuu faahfaahin ka bixiyaa talaabooyinka hubi in qoraalkaaga la dhejiyay maqaalkooda taageera. Waxaan qoray sida loo hubiyo in Google ogyahay inaad haysato podcast haddii aad leedahay WordPress laakiin waxay ku martigelinayaan Podcast-ka dusha sare ee dibadda adeegga martigelinta.
Kudar Podner Smart Banner
Qalabka macruufka waxay awood u leeyihiin inay ku daraan banner caqli badan dusha sare ee websaydhkaaga dadka isticmaala Apple iPhone si ay u eegaan qoraaladaada, kuna fur barnaamijka 'Podcasts App', oo ay ugu qoraan. Waxaad ka akhrisan kartaa sida loo sameeyo taas maqaalkan iTunes Banners Smart oo loogu talagalay Podcasts.
Diiwaanada Lacag Bixinta
Waxa kale oo jira nidaamyo lacag bixin ah oo aad u adeegsan karto inaad ku martigeliso Podcast-kaaga ama aad u isticmaasho buug kale. In kastoo laga yaabo inaad ka labalabeyso inaad bixiso qaar ka mid ah kuwan, haddana ma ogaan kartid halka ay dhagaystayaashaadu dhegeysanayaan. Waxaan kugula talin lahaa inaad tijaabiso dhammaantood ugu yaraan hal sano oo aan arko nooca stats ee aad ka hesho buugyarahaan kahor intaadan joojin. Intooda badani waxay ku bilaabmaan koonto bilaash ah, laakiin waxaad si dhaqso leh u waayi doontaa boos ku jira koontadaada bilaashka ah.
Acast - Acast waxay bixisaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u abuurto oo aad ula wadaagto Podcast-kaaga meel walba.
Codka Boom - Codka Boom waxay awood u siineysaa inay duubayaasha martigeliyaan, qaybiyaan isla markaana lacag ka helaan codkaaga.
Xulka wararka oo dhan PodBean waxay aad ugu egtahay Spreaker sida martida loo yaqaan 'podcast host'. Khibraddeenna, waxaa jiray arrimo la xiriira soo dejinta quudinkeenna RSS taas oo ah inaysan had iyo jeer helin dhacdooyinkii ugu dambeeyay. Laakiin wali, waa marti caan ah oo ka mid ah kuwa wax duuba.
Raadinta - PodSearch wuxuu kuu soo bandhigayaa qalab raadin si sahlan loo isticmaali karo, oo ay ku jiraan qaybaha, bandhigyada sare, bandhigyo cusub, iyo ereyada muhiimka ah, si lagaaga caawiyo inaad heshid podcasts aad ka heli doonto. Isku qor halkan.
SoundCloud - SoundCloud waa mid ka mid ah tusayaashii ugu dambeeyay ee Edge ee Raadiyaha Webku ku jiro isla markaana leh koontadeena Libsyn, waxaan awoodnay inaan si toos ah labadooda isugu waafajinno isla markaana abuuritaanka koontadu waxay ahayd mid aad u fudud iyada oo loo marayo Libsyn.
Khariidad - Spreaker waa marti-geliye caan ah, gaar ahaan kuwa wax duuba ee raba inay si toos ah u tabiyaan. Waxay heystaan ​​ciyaaryahan weyn oo kuu oggolaan doona inaad sameyso qulqulka tooska ah iyo sidoo kale diiwaan galiso dhacdo kasta oo loogu talagalay kuwa seegay baahinta tooska ah.
Waan hubaa inay jiraan kuwa kale, laakiin kuwani waa hageyaasha aan ku isticmaalno Edge Media Studios ee macaamiishayada wax soo saarka podcast. Haddii aad hayso dad kale oo aan u xiisay, hubi inaad ii sheegto faallooyinka hoose!
Ciyaartoyda Webka Podcast
Widget WordPress Podcast Sidebar - iyada oo aan loo eegin meesha ay ku taal martigelintaada, ku darista boggaaga waa hab fiican oo lagu helo qaar ka mid ah dhagaystayaasha ku habboon. WordPress Podcast Sidebar wuxuu u oggolaanayaa widget ama shortcode labadaba inuu ku dhajiyo dhammaan quudintaada 'Podcast' (oo leh ciyaaryahan) meel kasta oo ka mid ah boggaaga.
Jetpack - Qalabka 'WordPress' ee horudhaca ah ee loogu talagalay kor u qaadista bartaada ayaa hadda leh boodhadh Podcast ah oo aad ku dari karto waxyaabahaaga oo si toos ah u abuuraya ciyaaryahan podcast ah.
Waa kuwan qaar ka mid ah fiilooyin dheeri ah oo la bixiyay oo si qurux badan ugu soo bandhigi doona qoraaladaada gudaha WordPress.
MP3 Xidig Ciyaaryahan WordPress Plugin
Royal Audio Player Plugin -ka WordPress
HTML5 Ciyaartoyda Maqalka ah WordPress Plugins Bundle
Ha iloobin doorka muhiimka ah ee ay baraha bulshada ka ciyaari karaan dhiirrigelinta qoraaladaada, mid cusub iyo mid duug ah! Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram… xitaa Google + all dhammaantood waxay kaa caawin karaan inaad kobciso dhagaystayaashaada isla markaana aad u kaxeyso dhagaystayaasha iyo macaamiisha badan ee mawduucaaga.
Iyada oo ah qalab maamulka warbaahinta bulshada sida Agorapulse, waxaad saf ugu gali kartaa saamiyada dhammaan astaamahaas si fudud, sidoo kale waxaad u sameysan kartaa saami soo noqnoqda kuwa podcast-yada ah ee aad u maleyn karto inay yihiin kuwa cagaaran. Ama, haddii aad isticmaasho qalab sida FeedPress, waxaad si otomaatig ah ugu daabici kartaa Podcast-kaaga boggagaaga warbaahinta bulshada si otomaatig ah.
Markaad ku kobciso dhagaystayaashaada barnaamijyadaas, taageerayaasha cusub waxaa laga yaabaa inaysan arkin qoraaladaada hore, markaa taasi waa hab fiican oo lagu kordhiyo muuqaalka. Furaha ayaa ah in la abuuro qoraallada warbaahinta bulshada ee ku hawlan, halkii laga baahin lahaa kaliya cinwaankaaga cinwaankaaga. Isku day inaad weydiiso su'aalo ama aad qorto waxyaabaha waaweyn ee laga qaato. Hadana haddii aad wareysi la yeelatay ama aad xustay nooc kale ama saamayn, hubi inaad ku calaamadeysid saamiyadaada bulshada!
Daah-furka: Waxaan u isticmaalayaa isku-xirayaasha xiriirinta qoraalkan oo dhan badeecooyin badan.
Tags: caqiido ahamazon musicwax kastaaudioboomblubrrysanduuqaCastrowarbaahinta geeskaistuudiyaha warbaahinta geeskabuugga tusahagoogle playiheartradioiTunesJetpacklibsynSuuqgeynta Suuqgeyntawareysiyada martechKalluunliistada Podcastgalka PodcastPodcast feedmartigalinta Podcastmetrik Podcastdhiirrigelinta Podcastisku dhafka Podcastpodcastingxayeysiisqashin -qubkabandhigSoundCloudSpotifyruxaytoliyegudbi Podcast-kaagais-biirintatuneinvulblruxruxohalka lagu martigaliyohalka laga dallacayoxagee laga shaqaysan karaaWordPress